Israeri inogumisa mandichi mask mandate
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Israel Nhau » Israeri inogumisa mandichi mask mandate
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Israel inogumisa zvemukati maski mvumo
Musi weChipiri, Israel inogumisa chigaro-chemukati-chekupfeka mvumo mwedzi mumwe mushure mekubvisa mutemo wekunze.
Yemukati yekupfeka maski-yekupera inoguma muIsrael.
Kunze kwekungosara ndekwevashandi nevashanyi kuzvipatara, dzimba dzinochengetwa vakwegura, uye nendege.
Kungori 25 nyowani dze COVID-19 hutachiona hwakanyoreswa muIsrael neMuvhuro.
Israel neChipiri yakasimudza mwaka wekupedzisira coronavirus-era kurambidzwa, ichipedzisa imba yayo yekupfeka maski-mwedzi mumwe mushure mekubvisa mutemo wekunze.
Izvo chete zvinosara ndezvevashandi nevashanyi kuzvipatara, dzimba dzevanotarisira vakwegura, uye nendege, nevaya vari munzira yekuzviparadzanisa nevamwe.
NeMuvhuro, makumi maviri nemashanu chete hutachiona hutsva hwakanyoreswa, kuenderera kwemavhiki ekureba kweyechete kusvika yakaderera zvakapetwa kaviri mumatambudziko matsva ezuva nezuva.
Zvishoma pane 0.1% zveyese bvunzo zvadzoka zvakanaka pamwedzi wapfuura.
Parizvino pane makumi maviri nematanhatu veIsrael vari muchipatara vaine hutachiona, makumi matatu vavo vari mune zvakakomba, nekuda kweanosvika makumi matanhatu neshanu muzana yeruzhinji irikugamuchira imwechete yeaya maviri anodiwa majekiseni ekudzivirira.
NeMuvhuro, Gurukota rinouya rezvehutano Nitzan Horowitz akatenda gurukota riri kubuda, Yuli Edelstein nekuedza kwake panguva yechirwere ichi uye akavimbisa "kuchengetedza nekusimbisa" hurongwa hwenyika.
"Dambudziko iri ratora hupenyu, rakaremadza nyika yese, maJuda nemaArabu, varume nevakadzi. Tine matambudziko akakura pamberi pedu, ”akadaro Horowitz.
Source: Iyo Media Line